APIE ၏အပိုင်းအစ - အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၈ သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
ညနေ ၅း၁၀
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းအစီအစဉ်များသည်အရှိန်အဟုန်နှင့်တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများမှ APIE ရှိဝန်ထမ်းများအထိကျွန်ုပ်တို့သည် Austinites လူငယ်များ၏အောင်မြင်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်သင်၏ကတိက ၀ တ်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဤပြissueနာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာလူထုမှအကြံဥာဏ်များနှင့်ထောက်ခံစာများကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
သူငယ်ချင်းရည်ညွှန်းသည် APIE အကြောင်းစကားလုံးကိုဖြန့်ဝေ
“ ကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးတဲ့လမ်းညွှန်ကသူတို့ဘဝကိုတကယ်ထူးခြားစေတယ်။ ကျောင်းအားလုံး၌စေတနာ့ဝန်ထမ်းများလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကလေးဘ ၀ အတွက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။ -Joan, APIE သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြ
"အပတ်တိုင်းလာမယ့်ငါ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေရုံသာမကသူ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးလိုတယ်။ -Derrick, APIE ဆရာ
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းအစီအစဉ်များတွင်အစက်အပြောက်များဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်ဖော်များ၊ အိမ်နီးချင်းများထံသင်“ ကျောင်းသားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုကြိုက်လား? သင်ယူသူလူငယ်တစ် ဦး ၏ပညာရေးကိုကြွယ်ဝစေရန်တစ်ပတ်လျှင်တစ်နာရီပေးနိုင်ပါသလား။ ” သူတို့ကို APIE နဲ့ဆက်သွယ်စေချင်တယ်။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ မှတ်ပုံတင်ရန်။
APIE နှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းအကြောင်းကိုထောက်ခံစာများပိုမိုနားထောင်ပါ ဒီမှာ.
အမြန်ကိုက်၏ APIE | သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ဆက်ဆံရေးသည်သင်ယူမှု၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကျောင်းသားများကိုသိရန်အချိန်ဖြုန်းပါ။ သင်သည်သူတို့၏အမည်များကိုသိပြီးအသုံးပြုပါ။ သူတို့ဘဝအကြောင်းကိုလေ့လာရန်မေးခွန်းများမေးပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်သူတို့နှင့်သင်လိုချင်သည့်ဆက်ဆံရေးနှင့်သူတို့ကမ္ဘာနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နိုင်ပုံကိုမော်ဒယ်လ်လုပ်နေသည်။
စိတ်ရှည်ပါ။ ခက်ခဲသောအယူအဆများကိုသင်ယူသောအခါကျောင်းသားများသည်စိတ်ပျက်အားလျော့သွားနိုင်သည် သင်္ချာဘာသာရပ်သည်လေ့လာရန်အချိန်ယူရသောဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြများသည်မေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ ဆွေးနွေးခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။
သင်္ချာနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းနေ့စဉ်ဘဝကိုသဘောတရားများနှင့်ဆက်စပ်ပါ။ ကျောင်းသားကသင်ခန်းစာသည်သက်ဆိုင်သည်ဟုမယူဆလျှင်ပင်၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကမ္ဘာတွင်သင်္ချာကိုမည်သည့်အချိန်၌သုံးနိုင်သည်ကိုသတိပေးပါ။ သင်္ချာနှင့်သင်ယူမှုအတွက်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမျှဝေပါ။
အမှားများကိုကျင်းပပါ။ အမှားတစ်ခုသည်သင်ယူရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အမှားများကိုဆန်းစစ်ရန်ကူညီပါ။ သို့မှသာသူတို့သင်ယူရန်လိုအပ်နေသေးသည်။
အားထုတ်ကြိုးပမ်းပါ။ သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားများ၏တိုးတက်မှုကိုဂုဏ်ပြုပါ။ သင်အားဖြည့်လိုသည့်သူတို့၏အပြုအမူများအတွက်စစ်မှန်။ တိကျသောချီးမွမ်းမှုကိုပေးပါ။ (“ ဒီပြသနာကဘာလဲဆိုတာသင်နားလည်အောင်သေချာအောင်မေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယ်။ ” သို့မဟုတ်“ ပြtheနာကိုသင့်သူငယ်ချင်းအားသင်ရှင်းပြပုံကိုငါကြိုက်တယ်။ ”)
ပျော်ရွှင်ပါစေ။ သင်၏ကျောင်းသူ / သားများနှင့်သင်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောဆက်ဆံရေးသည် ၄ င်းတို့၏ကမ္ဘာ့အမြင်အပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျောင်းသားများသည်ဂရုစိုက်တတ်သောအသိုင်းအဝိုင်း ၀ င်တစ် ဦး အားသူတို့၏စာသင်ခန်းသို့လာရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ သင်္ချာ၊ ကျောင်းသားများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့ရန်သတိရပါ။
အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်th APIE မှစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ အလှူရှင်များ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များသည် Austin Eastcider တွင်စာသင်နှစ်အသစ်ကိုအရသာခံခဲ့သည်။ API ၏သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးသော cider အမျိုးမျိုးအပြင်အရသာရှိသောမြင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ရပြီး Trader Joe မှလှူဒါန်းသည်။ ငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်သူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ပေးခြင်း | နိုဝင်ဘာ 27, 2018
ဒီအားလပ်ရက်ရာသီ၊ လက်ဆောင်ပေးမယ် Austin ISD ကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းသားများအတွက်လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်နည်းပြဆရာ၏။ APIE သည် Austin ISD ကျောင်းသားများနှင့်သင်၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းမှုများမှတစ်ဆင့်သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများနှင့်သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ရန်သင်၏ပြက္ခဒိန်များကိုမှတ်သားပါ နိုဝင်ဘာ ၂၇.
ဂရုစိုက်တတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 21, 2018
ယူအက်စ်တက္ကဆက်ရှိ Fall Way Caring 2018 ကိုလက်ခံကျင်းပသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများအား APIE မှနွေးထွေးစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ JP Morgan Chase မှ ၀ င်ရောက်လာသူများသည်စာသင်နှစ်သစ်ကိုစတင်စဉ် APIE ၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြသင်တန်းအတွက်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် JP Morgan နှင့် UWATX!
2019 Austin မာရသွန် | ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
2019 Austin Marathon, Half-Marathon နှင့် 5K တို့သည် ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပွင့်လင်းသည်, ငါတို့သင်သည်ငါတို့အသင်း join လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ဒီမှာ!
နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အတွင်းလူပုံပြင်များနှင့်စျေးနှုန်းအသိပေးချက်များကို Austin Partners In Education မှလိုက်နာပါ Facebook, တွစ်တာနှင့် Instagram.
Prevရှေ့APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: သြဂုတ်လ 2018 သတင်းလွှာ